Qormo Muhiim ah: Somaliland iyo Dunida Maanta - Somaliland Post
Home Maqaallo Qormo Muhiim ah: Somaliland iyo Dunida Maanta
Marka loo fiirsado xaaladda ay dunidu ku sugan tahay maanta, lana barbardhigo ta Jamhuuriyadda Somaliland, waxa ku waajib ah qof kasta oo Somaliland u dhashay inuu Illaahay u xamdi naqo, ku shukriyo, istiqfaarkana badsado.
Waxa loo baahan yahay in nimcada diinta Islaamka iyo iimaanka uu ina siiyey, inuu Ilaahay innoogu daray nimcoyin kale oo ay ka mid yihiin inuu innaga badbaadiyey aafooyinka iyo masiibooyinka kala duwan ee dunida ku habsaday xilligan.
Waxa la inooga baahan yahay si nimcooyinkaasi nusqaatoodu aanay inoogu dhicin, in aan ka fogaano dhammaan falalka ay innaga xaaraantinimaysay ama ay inoo diidayso shareecadeena Islaamka.
Su’aasha inala gudboon in aan is waydiino waxay tahay, maxaa Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal yar, khayraadkiisa badankiisu wali dihin yihiin, dhaqaale buuran aan lahayn, la iska indho-tirayo xaqa uu u leeyahay aqoonsi uu kaga duwan yahay dalal badan oo kale oo jaho-wareer dhaqaale, siyaasadeed, bulsho uu maanta haysto?
Waxa saldhig u ah nimcooyinkan ballanqaadka aan u qaadnay EEBBE marka aynu calankeena ku suntannay kelmedda waxdaaniyadda Ilaahay ee ah Laa ilaaha Illaahu Muxamedow rasuulullaah, in aan ku dhaqmayno.
Dhinaca dhaqaalaha, waxaan arkaynaa in dalalka horumaray iyo kuwa soo korayaaba ay dhaqaale burbur ka baqayaan, Shirkadaha waawaynna ay dhaqaale kab u samaynayaan sida shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah oo kale.
Dalalkaasi iyo shirkadahaasi waxay shaqaale-dhin ku sameeyeen boqolaal kun oo xirfadlayaal ahaa oo u shaqayn jiray. Ganacsatada yaryar ee dalalkaasi, qaar badan oo ka mid ah ayaa kacay, rejada laga qabo in ganacsigoodu uu soo noqdana aad ayay u yar tahay.
Waxa aynu maqlaynaa in dad badan oo ku nool dalalka horumaray loo qaybiyo cunto maalmeedkooda, iyagoo safaf dhaadheer u galaya- iyagoo gaadiid wata ama lugaynaya, halka qaar kalena samo-falayaal ayaa guryaha ugu geeya waxay quudan lahaayeen maalintaa. Shaqaale badan oo dunida horumartay ku nool ayaa dibad-yaal noqday markii ay kiradii guryaha ay ku nool yihiin iska bixin kari waayeen.
Xaaladda Jamhuuriyadda Somaliland markaan barbar dhigno xaaladaha dalal badan oo dhinaca dhaqaalaha ku horumaray oo sida aan sheegnay ku sugan; miyaanay innagu sii waajibin in aan Ilaahay (SWT) u mahadnaqno, istiqfaarka badino, isla markaana ka fogaano dhaqan kasta oo Ilaahay innaga fogaynaya.
Aafooyinka dabiiciga ah ee duufaano, daadad laxaad leh, dabaylo, dhul gariir iyo dab-ba leh Illaaha innaga bad baadiyey oo nimco noogu beddelay in aan u mahadnaqno. Dhibaatooyinkaa caalamka haysta waxa innaga soo gaadhay waa Ayax lala dagaalamo iyo dabaylo xoog leh oo mar innagu dhacay.
Dhinaca siyaasadda, waxa halis ku jira hab-dhaqankii dimuqraadiga ah ee dalalka horumaray qaarkood, cunsuriyaddii ayaa si xoog leh ugu soo noolaanaysa dalalkaas. Iska hor imaadkii siyaasadeed ayaa isku beddelay ama isu beddelay mid hubaysan dalalka qaarkood. Dalal badani na waxay kaabiga u saaran yihiin heer burbur ah.
Waa Illaahay mahaddii in Jamhuuriyadda Somaliland khilaafyadii aragtiyeed ee siyaasadeed ay wadahadal ku xalisay, iyagoo danta guud ee shacbiga iyo qaranka ka horumariyey ta xisbi iyo shaqsiba. Waxa qof kasta oo reer Somaliland ah looga baahan yahay inuu ku diirsado in axsaabtu xal ku-meel-gaadh ah u heleen arrintii kootada ku saabsanayd, inta xal u helidaada loo jabin lahaa qodobbo ka mid ah dastuurka.
Waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Somaliland wakhtigan dunidu jahawareerka ku jirto, wax u kordha mooyaane wax ka dhaca ay aad u yar yihiin. Korodhkaas oo ah mid adkayn nabadgalyo, shaqo abuuris, bisayl siyaasadeed, kaabayaal dhaqaale oo ay ka mid yihiin Madaarka caalamiga ah ee Berbera oo dhammaad ku dhow inay u suurtogaleen. Waxa maanta loo baahan yahay kordhinta, wacyigalinta dhallinyarada; iyadoo diiradda la saarayo sidii looga badbaadin lahaa ku dayashada dhaqannada shisheeye ee aan wax-ku-oolka ahayn iyo sidii ay wakhtigooda firaaqada ah uga faa’iidaysan lahaayeen, waddaninimada iyo dal-jacaylkana ay u baran lahaayeen.
W/Q: Suxufi Xuseen Cali Nuur, Hargeysa, Somaliland.